UMTHETHO WABUCALA - UMTHETHO WABUCALA
Eyona Umthetho Wabucala umthetho wabucala
Siyaqonda ukuba ubumfihlo kwi-Intanethi kubalulekile kubasebenzisi beSayithi yethu, ngakumbi xa siqhuba ishishini. Le ngxelo ilawula imigaqo-nkqubo yethu yabucala ngokubhekisele kwabo basebenzisi beSiza (abatyeleli) abatyelela ngaphandle kokwenza ishishini kunye nabakhenkethi ababhalisela ukwenza ishishini kwiSayithi kwaye basebenzise iinkonzo ezahlukeneyo ezinikezelwa nguLizapourunemerenbleus (ngokudibeneyo, iiNkonzo) (Abathengi abagunyazisiweyo) ).
Ulwazi oluchongiweyo ngokobuqu lubhekisa kulo naluphi na ulwazi oluchonga okanye olunokusetyenziselwa ukuqaphela, ukunxibelelana, okanye ukufumana umntu lowo ulwazi olo lubhekisa kuye, kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, igama, idilesi, inombolo yomnxeba, inombolo yefeksi, idilesi ye-imeyile, iiprofayili zemali , inombolo yokhuseleko loluntu, kunye nolwazi lwekhadi letyala. Ulwazi oluchongiweyo lomntu alubandakanyi ulwazi oluqokelelwa ngokungaziwayo (Oko kukuthi, ngaphandle kokuchongwa komsebenzisi) okanye ulwazi lwedemokhrasi olungadibananga nomntu ochongiweyo.
Loluphi ulwazi oluchongiweyo lomntu oluqokelelweyo?
Singaqokelela ulwazi olusisiseko lomsebenzisi kubo bonke abatyeleli bethu. Siqokelela olu lwazi lulandelayo kubathengi bethu abagunyazisiweyo: amagama, iidilesi, iinombolo zomnxeba kunye needilesi ze-imeyile zaBathengi abaGunyazisiweyo, uhlobo kunye nobukhulu beshishini, kunye nohlobo nobungakanani bezinto zentengiso uMthengi oGunyazisiweyo anqwenela ukuzithenga okanye thengisa.
Yeyiphi imibutho eqokelela ulwazi?
Ukongeza kwingqokelela yolwazi ngokuthe ngqo, abathengisi beenkonzo zomntu wesithathu (ezinje ngeenkampani zamakhadi etyala, izindlu zokucoca kunye neebhanki) abanokubonelela ngeenkonzo ezinje ngetyala, i-inshurensi, kunye neenkonzo zokuhamba bangaqokelela olu lwazi kubaTyeleli bethu nabaThengi abagunyazisiweyo. Asilawuli ukuba la maqela esithathu alusebenzisa njani olo lwazi, kodwa siyabacela ukuba bachaze ukuba balusebenzisa njani ulwazi lobuqu abalunikwa ngabaTyeleli kunye nabaThengi abagunyazisiweyo. Abanye bala maqela esithathu banokuba ngabalamleli abasebenza kuphela njengezixhumanisi kwityathanga lokuhambisa, kwaye bangagcini, bagcine, okanye basebenzise ulwazi abalunikiweyo.
Ngaba iSiza silusebenzisa njani uLwazi oluChongiweyo lwaBantu?
Sisebenzisa ulwazi oluchongiweyo lomntu ukwenza iSiza ngokwezifiso, ukwenza iinkonzo ezifanelekileyo, kunye nokuzalisekisa ukuthenga nokuthengisa izicelo kwiSiza. Sinokuthumela abatyeleli nge-imeyile kunye nabaThengi abagunyazisiweyo malunga nophando okanye ukuthenga nokuthengisa amathuba kwiSiza okanye ulwazi olunxulumene nomxholo weSayithi. Sinokusebenzisa uLwazi oluchongiweyo lomntu ukuqhakamshela abaTyeleli kunye nabaThengi abagunyazisiweyo ekuphenduleni imibuzo ethile, okanye ukubonelela ngolwazi oluceliweyo.
Olu lwazi lunokwabelana nabani?
Ulwazi oluchongiweyo lwaBucala malunga nabaThengi abagunyazisiweyo kunokwabelwana ngalo nabanye abaThengi abagunyazisiweyo abanqwenela ukuvavanya unaniselwano olunokubakho nabanye abaXhasi abagunyazisiweyo. Singabelana ngolwazi oludibeneyo malunga nabakhenkethi bethu, kubandakanya inani labakhenkethi bethu kunye nabaThengi abagunyazisiweyo, neearhente zethu ezisebenzisanayo kunye nabathengisi bomntu wesithathu. Sikwabonelela ngethuba lokukhetha ukufumana ulwazi okanye ukunxibelelana nathi okanye yi-arhente esebenza egameni lethu.
Lugcinwa njani uLwazi oluChongiweyo lomntu buqu?
Ulwazi oluchongiweyo lomntu oluqokelelwe yiLizapourunemerenbleus ligcinwe ngokukhuselekileyo kwaye alifikeleleki kubantu besithathu okanye abasebenzi beLizapourunemerenbleus ngaphandle kokusetyenziswa njengoko kubonisiwe apha ngasentla.
Luluphi ukhetho olufumanekayo kubatyeleli malunga nokuqokelela, ukusetyenziswa kunye nokuhanjiswa kolwazi?
Iindwendwe kunye nabaThengi abagunyazisiweyo banokukhetha ukuphuma ekufumaneni ulwazi olungacelwanga okanye ukuqhagamshelana nathi kunye / okanye abathengisi bethu kunye neearhente ezimanyeneyo ngokuphendula kwii-imeyile njengoko kuyalelwe, okanye ngokuqhagamshelana nathi apha.
Ngaba iiKuki ziyasetyenziswa kwesi siza?
Iicookies zisetyenziselwa izizathu ezahlukeneyo. Sisebenzisa iiKuki ukufumana ulwazi malunga nezinto ezikhethwa ngabakhenkethi bethu kunye neenkonzo abazikhethayo. Sikwasebenzisa iiKuki ngeenjongo zokukhusela abaThengi bethu abagunyazisiweyo. Umzekelo, ukuba uMthengi oGunyazisiweyo ungene kwaye isiza asisetyenziswanga ngaphezulu kwemizuzu eli-10, siya kuthi ngokuzenzekelayo sisuse uMthengi oGunyazisiweyo. Ukongeza, sinokusebenzisa ii-cookies ukubonelela ngeenkonzo zokulinganisa kunye nokujolisa kwiintengiso. Abasebenzisi banokukhetha ukuqokelela le datha kwaye kufuneka batyelele i-www.aboutads.info/choices ngolwazi oluthe kratya.
ILizapourunemerenbleus ilusebenzisa njani ulwazi lokungena?
I-Lizapourunemerenbleus isebenzisa ulwazi lokungena, kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, iidilesi ze-IP, ii-ISPs, kunye neentlobo zebrawuza, ukuhlalutya imikhwa, ukulawula iSayithi, ukulandelela intshukumo yomsebenzisi kunye nokusetyenziswa, kunye nokuqokelela ulwazi olubanzi lwabantu.
Ngawaphi amaqabane okanye ababoneleli beenkonzo abanokufikelela kulwazi oluchongiweyo oluvela kubaTyeleli kunye / okanye abaThengi abagunyazisiweyo kwiSiza?
I-Lizapourunemerenbleus ingene kwaye iya kuqhubeka nokungena kubambiswano kunye nezinye izinto ezinxulumene nenani labathengisi. Abathengisi abanjalo banokufikelela kulwazi oluthile oluchongiweyo lomntu ngesidingo sokwazi isiseko sokuvavanya abaThengi abagunyazisiweyo ukufaneleka kwenkonzo. Umgaqo-nkqubo wethu wabucala awugubungeli ingqokelela yabo okanye ukusetyenziswa kolwazi. Ukubhengezwa koLwazi oluChongiweyo lomntu ukuthobela umthetho. Siza kuchaza uLwazi oluchongiweyo lomntu ukuze sihambisane nomyalelo wenkundla okanye isupina okanye isicelo esivela kwi-arhente yokunyanzeliswa komthetho ukuba sikhuphe ulwazi. Siza kuphinda siveze uLwazi oluChongiweyo lwaBantu xa kufanelekile ukukhusela abaKhenkethi bethu kunye nabaThengi abagunyazisiweyo.
Ngaba iSayithi igcina njani ulwazi oluchongiweyo lomntu lukhuselekile?
Bonke abasebenzi bethu baqhelene nomgaqo-nkqubo nezokhuseleko. Ulwazi oluchongiweyo lwaBakhenkethi bethu kunye nabaThengi abagunyazisiweyo lufikeleleka kuphela kwinani eliqingqiweyo labasebenzi abafanelekileyo abanikwa ipaswedi ukuze bakwazi ukufikelela kulwazi. Siphicotha iinkqubo zethu zokhuseleko kunye neenkqubo rhoqo. Ulwazi olubuthathaka, olufana neenombolo zamakhadi okuthenga ngetyala okanye iinombolo zokhuseleko loluntu, lukhuselwe yimigaqo ebethelelayo, endaweni yokukhusela ulwazi oluthunyelwe kwi-Intanethi. Ngelixa sithatha amanyathelo afanelekileyo kwezorhwebo ukugcina indawo ekhuselekileyo, unxibelelwano nge-elektroniki kunye noovimba kuxhomekeke kwiimpazamo, ukuphazanyiswa kunye nokungena, kwaye asinakuqinisekisa okanye siqinisekise ukuba ezo ziganeko azizukwenzeka kwaye asizukubekwa tyala kubaNdwendwe okanye abagunyazisiweyo Abathengi ngazo naziphi na izehlo ezinjalo.
Abaveleli banokuzilungisa njani naziphi na iimpazamo kuLwazi oluChongiweyo lomntu?
Iindwendwe kunye nabaThengi abagunyazisiweyo banokunxibelelana nathi ukuze bahlaziye iiNkcukacha zabo ezichongiweyo malunga nabo okanye balungise naziphi na izinto ezingachanekanga ngokusithumela nge-imeyile ku-xperior.com
Ngaba uMtyeleli unokucima okanye angasebenzi uLwazi oluchongiweyo oluQokelelwe siSiza?
indlela yokubopha uzwane
Sinika abaTyeleli kunye nabaThengi abagunyazisiweyo indlela yokucima / yokwenza ulwazi oluChongiweyo lwaBantu kwiziko ledatha leSayithi ngokunxibelelana nokuthumela ku-xperior.com. Nangona kunjalo, ngenxa ye-backups kunye neerekhodi zokususa, kunokuba nzima ukucima ukungena kweNdwendwe ngaphandle kokugcina ulwazi olushiyekileyo. Umntu ocela ukuba ulwazi oluKhubazekileyo luCinywe uya kuyicima le nkcukacha ukuba isebenze, kwaye asizukuthengisa, sithumele, okanye sisebenzise ulwazi oluchongiweyo lomntu oluhambelana nalo mntu nangayiphi na indlela eya phambili.
Kwenzeka ntoni ukuba uMgaqo-nkqubo wabucala uyatshintsha?
Siza kwazisa iindwendwe zethu kunye nabaThengi abagunyazisiweyo malunga notshintsho kumgaqo-nkqubo wabucala ngokuthumela olo tshintsho kwiSayithi. Nangona kunjalo, ukuba sitshintsha umgaqo-nkqubo wethu wabucala ngendlela enokubangela ukuvezwa kweNgcaciso yeNkcukacha yoMntu ukuba uMtyeleli okanye uMthengi oGunyazisiweyo ebecele ngaphambili ukuba ingachazwa, siya kuqhakamshela loo Ndwendwe okanye uMthengi ogunyazisiweyo ukuba avumele olo Ndwendwe okanye uMthengi ogunyazisiweyo olo bhengezo.
Ubungakanani obukhulu kunye nomama osemthethweni wabanxibe umtshakazi
Amakhonkco: Le webhusayithi inamakhonkco kwezinye iiwebhusayithi. Nceda uqaphele ukuba xa ucofa kwelinye lala makhonkco, uya kwenye iwebhusayithi. Siyakukhuthaza ukuba ufunde ingxelo yabucala yezi sayithi zinxibeleleneyo njengoko imigaqo-nkqubo yabucala isenokwahluka kweyethu.
Ngokuhambelana nomthetho we-European Union, siyakwazisa ukuba iwebhusayithi yethu iya kugcina ulwazi malunga nokhetho lwakho kwikhompyuter yakho ngaphakathi kwifayile encinci ebizwa ngokuba yi-'cookie '.
Icookie sisiqwengana sedatha ethi iwebhusayithi ibuze umkhangeli wakho ukuba ayigcine kwikhompyuter yakho okanye isixhobo esiphathwayo. Icookie ivumela iwebhusayithi ukuba ikhumbule izenzo zakho okanye izinto ozikhethayo ngokuhamba kwexesha.
Ungazicima zonke iicokies esele zikwikhompyuter yakho kwaye unokuseta uninzi lwebrawuza ukunqanda ukubekwa kwazo. Ukuba uyakwenza oku, nangona kunjalo, kuya kufuneka uhlengahlengise izinto ozikhethayo ngalo lonke ixesha undwendwela indawo kwaye ezinye iinkonzo kunye nokusebenza kunokungasebenzi.
Uninzi lweebrawuza zixhasa ii-cookies, kodwa abasebenzisi banokuseta izikhangeli zabo ukuba bazenqabe kwaye banokuzicima nanini na xa befuna. Indawo yeqela lesithathu ekuthiwa malunga ne-cookies.org isetiwe ukukunceda ngemiyalelo yokuba ungayenza njani kwiibrawuza ezahlukeneyo.
Sisebenzisa ii-cookies uku:
1) Chonga njengomsebenzisi obuyayo kunye nokubala utyelelo lwakho kuhlalutyo lweenkcukacha-manani zendlela;
2) khumbula ukhetho lwakho lokubonisa ngokwesiko;
3) Cebisa naluphi na uphando olwenzileyo kwindawo yethu
4) Ezinye izinto ezinokusebenziseka kubandakanya ukulandela umkhondo wokuba sele uyinikile imvume yakho kwicookies
Ukwenza iicookies kwiwebhusayithi yethu akuyomfuneko ngokungqongqo ukuba iwebhusayithi isebenze kodwa iya kukubonelela ngamava abhetele okukhangela.
Ulwazi olunxulumene necookie alusetyenziswanga ukukuchonga buqu kunye nedatha yepateni iphantsi kolawulo lwethu ngokupheleleyo. Ezi cookies azisetyenziswanga nayiphi na injongo ngaphandle kwezi zichazwe apha.
Kukho ezinye iintlobo zekhukhi ezenziwe emva kokuba undwendwele iwebhusayithi yethu. Sisebenzisa iGoogle Analytics, inkonzo eyaziwayo yokuhlalutya iwebhu enikezelwa nguGoogle, Inc. Uhlalutyo lukaGoogle lusebenzisa ikuki ukusinceda sihlalutye indlela abasebenzisi abayisebenzisa ngayo le ndawo. Ulwazi oluveliswe yicookie malunga nokusebenzisa iwebhusayithi yethu (kubandakanya idilesi ye-IP) luya kudluliselwa lize ligcinwe nguGoogle kumaseva aseMelika. UGoogle uya kusebenzisa olu lwazi ngenjongo yokuvavanya ukusebenzisa kwakho iwebhusayithi yethu, ukuqokelela iingxelo kwimisebenzi yewebhusayithi kunye nokubonelela ngezinye iinkonzo ezinxulumene nomsebenzi wewebhusayithi kunye nokusetyenziswa kwe-intanethi. UGoogle angadlulisela olu lwazi kubantu besithathu apho kufuneka benze njalo ngokomthetho, okanye apho abantu besithathu baqhubekeka nolwazi egameni likaGoogle. UGoogle akazibopheleli ekungadibaniseni idilesi ye-IP nayo nayiphi na idatha egcinwe nguGoogle.
Intengiso yomntu wesithathu
Sinokuba neenkampani zentengiso zomntu wesithathu ezithumela iintengiso kuwe xa undwendwela iwebhusayithi yethu. Ezi nkampani zingagcina ulwazi malunga notyelelo lwakho kwiwebhusayithi yethu nakwezinye iiwebhusayithi ukuze zikunike iintengiso ezifanelekileyo malunga neempahla kunye neenkonzo.
Ezi nkampani zinokuqesha ii-cookies kunye nezinye izinto ezichazayo ukuqokelela ulwazi olulinganisa ukusebenza kweentengiso. Olu lwazi alubonakalisi ngokobuqu ngaphandle kokuba, umzekelo, ubanika ulwazi oluchongiweyo kubo ngentengiso okanye umyalezo we-imeyile.
Ulwazi luqokelelwe ngaBathengisi beQela lesiThathu
Iicookies zenza abathengisi bafunde ukuba zeziphi iintengiso ozibonayo, zeziphi iintengiso ozicofileyo, kunye nezinye izinto ozenzayo kwindawo yethu nakwezinye iisayithi. Oku kuvumela abathengisi ukuba bakunikeze ngeentengiso eziluncedo ngakumbi nezifanelekileyo. Umzekelo, ukuba bayazi ukuba zeziphi iintengiso oziboniswayo xa undwendwela indawo yethu, banokuqiniseka ukuba bangakubonisi ezifanayo. Abadibanisi unxibelelwano lwakho kunye neendawo ezingadibaniyo nesazisi sakho ekuboneleleni ngentengiso esekwe kumdla.
Asiboneleli ngolwazi malunga nabathengisi okanye iisayithi zomntu wesithathu. Abathengisi kunye nabanye abantu besithathu (kubandakanya uthungelwano lweentengiso, iinkampani ezinikezela iintengiso, kunye nabanye ababoneleli beenkonzo abanokuthi basebenzise) banokucinga ukuba abasebenzisi abanxibelelana okanye abacofa kwintengiso eyenzelwe wena okanye umxholo bayinxalenye yeqela intengiso okanye umxholo ijolise ngqo (umzekelo, abafundi kwiPacific Northwest abafunda iintlobo ezithile zamanqaku). Kwakhona, ezinye ii-cookies zomntu wesithathu zinokubonelela ngolwazi malunga nawe (ezinje ngeendawo oboniswe kuzo iintengiso okanye ulwazi lwedemokhrasi) kwimithombo engaxhunyiwe kwi-intanethi nakwi-intanethi abanokuyisebenzisa ukukunika intengiso efanelekileyo kunye noluncedo.
Ukuba ungathanda ukufunda banzi malunga nokhetho onalo malunga nokunciphisa ukuqokelelwa kolwazi ngabantu besithathu, ungathetha kwiwebhusayithi Iphulo lokuThengisa iNethiwekhi .
Unokuphuma ekuthatheni inxaxheba kuthungelwano lwentengiso olusekwe kumdla kodwa ukuphuma akuthethi ukuba awusayi kuphinda ufumane intengiso ekwi-Intanethi. Oko kuthetha ukuba iinkampani okhethe ukuphuma kuzo azisayi kuphinda zenze intengiso ngokusekwe kwiminqweno yakho kunye neepatheni zokusebenzisa iwebhu zisebenzisa itekhnoloji esekwe kwicookie.
Uhlobo kunye nenjongo yokuqokelela
Siqokelela ulwazi kwiindawo ezahlukeneyo kwiWebhusayithi ukulungiselela ukusetyenziswa kwalo ngabathengi bethu. Iinkcukacha ezingezozakho buqu: Emva kokungena kwiWebhusayithi, ulwazi oluthile olungelulo olobuqu luya kuqokelelwa ngokuzenzekelayo ngaphandle kolwazi okanye imvume yakho, njengedilesi ye-IP, idatha yendawo (engaziwa) kunye newebhusayithi ekubhekiswa kuyo (Iinkcukacha ezingezozamntu). Sisebenzisa iiNgcaciso ezingezizo ezethu ukujonga ukugcwala kwabantu kunye nokujonga ukuba abathengi bayisebenzisa njani iWebhusayithi. Olu hlobo lolwazi aluyi kukuvumela ukuba uchongwe. Umzekelo, sisebenzisa ii-cookies, eziqulathe kuphela iinkcukacha-manani ezithile. Unokuyalela ikhompyuter yakho ukuba ikwazise nanini na kuthunyelwa i-cookie, okanye ungavumeli iicookies ngokusebenzisa isikhangeli sakho sewebhu. Ukuba ukhetha ukungavumeli iicookies, amava akho kwiWebhusayithi anokuncitshiswa, okanye amandla akho okukhetha ezinye zeWebhusayithi anokuncitshiswa.
Asizukuthengisa, sirente okanye sichaze amaqela angaphandle ulwazi esiluqokelelayo, silugcina ngaphandle kokuba sinokwabelana ngolwazi oluqokelelweyo namanye amaqela ngolu hlobo lulandelayo:
(a) Abanikezeli beenkonzo abaManyeneyo: Sinezivumelwano nabanikezeli beenkonzo abahlukeneyo ababandakanyekayo ukulungiselela ukusebenza kweWebhusayithi, esinokwabelana naye ngolwazi esiziqokeleleyo. Umzekelo, singabelana ngolwazi lwekhadi lakho letyala kunye nomnikezeli wekhadi letyala ukuze uqhubekeke ukuthenga kwakho. Bonke abanikezeli beenkonzo zolawulo esizisebenzisayo kulindeleke ukuba babenenqanaba elifanayo lokhuseleko lwabucala njengoko sinalo, ke ngoko silindele ukuba ulwazi lwakho luza kuphathwa ngenqanaba elifanayo lokhathalelo esilusebenzisayo. Ukongeza, umzekelo, sinokusebenzisa uhlalutyo okanye iinkonzo zentengiso ezinje ngeGoogle Analytics, Google Adsense, Taboola, okanye RevContent, apho uqokelela khona uvuma ngaphandle kwemeko.
(b) Apho kufunwa ngumthetho: Singabelana ngolwazi oluqokelelweyo apho lufunwa ngumthetho, ngakumbi ukuphendula ibango kumagunya karhulumente apho loo mfuno ihlangabezana neemfuno zomthetho.
ibhulukhwe yesuti yomntu olundwendwe lomtshato
(c) Uhlalutyo lweenkcukacha manani: Singabelana ngeeNkcukacha ezingezizo ezobuqu kunye nolwazi oluhlanganisiweyo kunye nabantu besithathu, kubandakanya kodwa kungaphelelwanga kwintengiso okanye ngeenjongo zokuthengisa. Akukho nkcukacha zobuqu ziya kwabelwana ngale ndlela.
(d) Iitransekshini: Ngokunxulumene, okanye ngexesha lothethathethwano lwayo nayiphi na indibaniselwano, ukuthengiswa kweeasethi zenkampani, ukuxhaswa ngemali okanye ukufunyanwa, okanye kuyo nayiphi na enye imeko apho iiNkcukacha zobuqu zinokuvezwa okanye zidluliselwe njengenye yeempahla zethu zeshishini.
Intengiso yeNkqubo yeMediavine
Ngolwazi malunga nokuqokelelwa kwedatha ngamaqabane eentengiso zeMediavine kubandakanya nendlela yokuphuma ekuqokeleleni idatha, nceda ucofe Apha
Ukukhetha kunye nendlela yokukhetha ukuphuma kwintengiso esekwe kumdla
(a) Ukukhetha ngaphandle kweeNkonzo zeNtengiso esekwe kuMdla kule webhusayithi lilungu le Iphulo lokuThengisa iNethiwekhi (NAI) kwaye ibambelela kwiNdlela yokuziPhatha ye-NAI njengoko kuchaziwe kwiwebhusayithi ye-NAI. Le webhusayithi ibambelela kwimigaqo yeDigital Advertising Alliance (DAA). Inkcazo yeNkqubo yeDAA, nceda undwendwele Iwebsite yeDAA . Njengoko kuchaziwe apha ngasentla, le webhusayithi inokusebenzisa okanye idlulise iData yeDivayisi eyiqokelela ngokuthe ngqo okanye eyifumana kubaThengi bale webhusayithi, abanokusebenzisa ii-cookies okanye iitekhnoloji ezingezizo ezicookie, ukwenza intengiso elungiselelwe ngakumbi iimfuno zabathengi, ukhetho lwabo, kunye neendawo. Lo mkhuba waziwa ngokuba yintengiso esekwe kumdla.
(b) Ukukhetha ukuphuma kwintengiso esekwe kuMdla ngamaQela esiThathu. Le webhusayithi inokuvumela umntu wesithathu ukuba aqokelele ulwazi kwiSiza sayo kwaye adibanise olo lwazi kunye nolunye ulwazi oluqokelelwe kwiiwebhusayithi ezingadibaniyo okanye kwizicelo ekuhambeni kwexesha. La maqela esithathu angasebenzisa ubuchwephesha, kubandakanya ikuki kunye neebhakoni zewebhu, ukuqokelela ulwazi malunga nokusetyenziswa kwaBathengi okanye abaThengi 'kweSiza ukuze bahlalutye, banike ingxelo, okanye benze umxholo okanye intengiso kule webhusayithi okanye kwezinye iisayithi, okanye sincede sisebenze kwaye siphucule iSiza. Ukufumana okuninzi malunga nentengiso esekwe kumdla kubume bewebhu, kunye nendlela yokuphuma ekuqokeleleni ulwazi ngale njongo ziinkampani ezithatha inxaxheba kwiNkqubo yokuThengisa yeNethiwekhi okanye kwiDigital Advertising Alliance, tyelela Iphepha lokuphuma le-NAI okanye Iphepha lokukhetha abathengi le-DAA .
Isikhokelo sokudibanisa umbala
indawo yomlilo yokuhlamba emhlophe
iikhabhathi ezingwevu ezixineneyo
yeyiphi isimaphambili oza kuyisebenzisa xa ungaqinisekanga ngobume bomtshato